Ngaba enye i-Bloom yaseCalifornia iya kwenzeka kulo nyaka-iBlackflower Super Bloom - Indlela Yokuphila
Iiroyals Kunye Nosapho Lwasebukhosini
Ngaba enye i-Bloom yaseCalifornia iya kwenzeka kulo nyaka-iBlackflower Super Bloom
UAllen J. AmaphelaImifanekiso kaGetty
Kwakukho uqhushumbo olubanzi kangaka lwe iintyatyambo zasendle eziqaqambileyo egubungela imihlaba eyomileyo yase-California kunyaka ophelileyo onokuthi ubone imifanekiso yeentyatyambo ezisuka emajukujukwini. Umbono odlamkileyo kunye onqabileyo, ii-blooms ezinkulu zatsala izihlwele zabantu. Nokuba ibubu amabhabhathane ayikwazanga ukumelana nokufudukela kwintabalala yezityalo. Njengoko kusondela intwasahlobo, sinomdla wokwazi: Ngaba indalo kamama iya kuyisikelela iMazantsi eCalifornia ngeentyatyambo ezingaphezulu kulo nyaka?
I-Super blooms, okanye inani leentyatyambo zasendle ezigqitha iintyatyambo eziqhelekileyo zentwasahlobo, zihlala zenzeka kumhlaba wentlango xa imvula egqithisileyo ilandelwa yimozulu ebandayo, ethi itshixe ukufuma emhlabeni. Nangona kusekuncinci ukuxelela ngokuqinisekileyo, iqikelele imozulu enethayo ibonisa ukuba ii-blooms ezinkulu zinokwenzeka. Kwaye ekubeni imbalela yaseCalifornia yaphela ngokusesikweni kunyaka ophelileyo, ukuqhushumba kweentyatyambo zasendle kungangcono nakwezinye iindawo kulo nyaka.
Iibhloko kungenzeka zisasazeke kwiAntelope Valley California Poppy Reserve eLos Angeles kwakhona kulo nyaka. UChris Hon, isazinzulu esiphezulu kwezendalo esinommandla esiquka ugcino, uxelele ILos Angeles Times ukuba indawo ifumene ngaphezulu kweesentimitha ezintlanu zekhephu ngeli xesha lonyaka. Sifumene imozulu ebandayo njengoko bekulindelwe ngenxa ye-superbloom enokubakho okanye nantoni na ofuna ukuyibiza, utshilo u-Hon. Ukuba siyigcinile imvula ukugcina ii-poppies zikhula, kunokwenzeka ukuba sibe nohlobo oluthile lwe-superbloom.
Iipalm Springs zikwanokubona iintyatyambo zasendle. Lilonke, uyakuba ngunyaka olungileyo kwiindawo ezininzi, utshilo umcebisi wezendalo uJames Cornett Ilanga lasentlango Iintyatyambo ezintle kwiPalm Springs. Silinde ukubona ukuba uya kuba ngunyaka omkhulu.
Ngaba unqwenela ukubona iintyatyambo kungekudala? Indawo yokuqala eneentyatyambo ezibalaseleyo zikajongilanga wasentlango, kunye ne-verbena yesanti emfusa iya kuba yiCathedral City, eRiverside, ngokwe Ilanga lasentlango . Indawo yokungena esezantsi yeJoshua Tree National nayo iya kuba neentyatyambo ezikhula kwangoko.
Okwangoku, masibe nethemba lemvula eninzi eCalifornia.
ithanga ukutya ithanga stencil
Isityalo semali saseTshayina
efihliweyo tv ngaphezulu kweziko